Ny lalàmpanorenana, ny lalàna mahakasika ny antenimieram-pirenena, lalàna mahakasika ny fifidianana dia tsy mamaritra mihitsy ny fametraham-pialan`ny filohan`ny Antenimieram-pirenena. Raha tiana ny manaja ny foto-pisainana tena repoblikanina dia tsy tokony hitarika io fivoriana io intsony izy na tsy takian`ny lalàna aza ny fametraham-pialany, fa tokony hikisaka tanteraka mihitsy satria tafiditra ao anatin`ny vanim-potoan`ny propagandy tanteraka. Lasa mifangaro ny maha kandidà azy sy amin`ny maha filohan`ny antenimiera azy ary mety hisy fampiasana fitaovam-panjakana sy volam-panjakana ao anatin`izay zavatra izay. Any amin`ny faritra dia misy fitaovam-panjakana, misy olom-panjakana, misy mpiasam-panjakana tsy misalasala mihitsy manao fampielezan-kevitra amina kandidà iray kanefa izay dia mety hiafara fanafoanana ny firotsaham-pifidianana. Na dia voatendry ho filoha vonjimaika aza ny depiote Hary Andrianarivo, izay napetrak’i Jean Max Rakotomamonjy ihany, dia mbola mifangaro amin`ny maha filohan`ny antenimieram-pirenena azy. Tsy misy lalàna mahasakana azy hanao an`izay mihitsy ka mahatonga an`ilay asa sy fampielezan-kevitra hifangaro. Hatreto aloha, tsy ampy mihitsy ny fepetra ahafahana mahazo fifidianana tena arofenitra sy demokratika.